NYI LYNN SECK 18+ DEN: Who's Who in Burma (1)
Posted by NLS at 4/19/2010 04:10:00 PM
6 Responses to “Who's Who in Burma (1)”
အစအဆုံး မတင်သေးပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...ဆက်ရန်ကို မျှော်နေပါတယ်...
မင်းရေးတာ...ဗဟုသုတအတော်ရတယ်ကွ...။ ငါ..မသိလို့မေးအုံးမယ်..။ မင်းတခြားအလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ ဘလောဂ့်ရေးတာ တော်တော်အချိန်ယူရမယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါနဲ့..ငါ့ခေါင်းထဲမှာ..မေးခွန်းတခုရှိတယ်ကွ...။ ဗုံးကွဲတဲ့နေ့တုံးက သူများတွေဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ ကင်မရာကိုင်တာတွေကိုဖမ်းတယ်။ ဘီဘီစီမှာလည်း...ပါတယ်။ မင်းကြတော့ ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်လို့ရတယ်...။ ဘလော့ဂ်မှာလည်း ပေါ်တင်တင်လို့ရတယ်။ ဘာ့ကြောင့်မင်းကိုကြတော့မဖမ်းလဲကွ။ ငါ့အထင်တော့ မင်းမိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေက အကောင်ကြီးကြီးတွေများလားလို့ပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်မဖမ်းတာလို့တော့ ငါထင်တယ်ကွာ။
မင်းမှာအရည်အချင်းရှိတယ်ဆိုတာ..ငါသိပါတယ်။ မင်းဘလော့ဂ်ကို..မင်းအားရင်ပေါ့ကွာ...ဆောင်းပါးလိုမျိုးမရေးပဲနဲ့...စာအုပ်တစ်လောက်တော့ ထုတ်နိုင်အောင်ရေးသင့်တယ်။ ဥပမာကွာ...လူမျောက်ကိစ္စတို့၊ အိုင်တီအကြောင်းတို့..။
ငါ့ကွန်းမက်ကိုဖတ်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်..။ ဖြစ်နိုင်ရင် နည်းပညာ Tech မှာ ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးရှိတယ်။ ဥပမာ အင်တာနက်မှာဆိုရင်လည်း...Banking, Internet Banking, Security, and so on ပေါ့ကွာ...ဒါတွေကို လုပ်နေတာက အင်တာနက်ပဲကွ..။ တမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အင်တာနက်ကိုကွာ မသမာသူတစ်ယောက်ယောက်လောက်က ဖျက်ဆီးလိုက်ရင်လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြမယ်ကွ။
နောက်ပြီးအီးမေးကိစ္စကွာ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာကော၊ အပြင်မှာပါ ဂျီမေးသုံးကြတယ်။ အီးမေးတွေအပြန်မလှန်ပို့ကြတယ်ကွာ။ ငါတို့ပို့တဲ့အီးမေးတွေကို လက်ခံတဲ့ Server ရှိတယ်ကွာ။ သူက တစ်ဆင့်တခြားသူတွေကိုပြန်ပို့ပေးတယ်ကွာ။ ငါ့တို့အီးမေးတွေကို ကြားခံလူ၊ Company က ဖောက်မဖတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်လား။ ဒါတွေကိုမင်းကိုရေးစေချင်တယ်။
မင်က Pro-blogger တောင်လုပ်ခဲ့တာပဲ။ ဒါမျိုးကို လိုင်းတစ်ခုခုချပြီးရေးရင်၊ စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ရင် မင်းအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်၊ ဖတ်တဲ့သူတွေလည်း တော်တော်အသုံးဝင်မယ်ကွ။
In case u don't notice his info, read it here,
P.S I don't think one has to bearelative of junta because of not being arrested.
Hi Ko Nyi, I'm translating (into French) two articles about the bloggers and MBS and lots of other things for RWB ( Reporters Without Borders ). Ofcourse, there's about you too. Thet's why I'm browsing your blog.
Actually, I'm not very familiar with the latest technologies. Please tell me how you write exactly in English for the seminar which was held by MBS in Hlaing, Yangon this year. The articles I'm translating are in Burmese and they have written the name in Burmese, something like "Barcump" I couldn't find it out :'( Please, Help!
Oh..I live in France if you need to know. Thanxalot in advance.
This was my Grandfather!
Does anyone know how I may contact my cousins who would also be his grandchildren?